Impilo yasebusuku yaseCebu, Philippines | Izindaba Zokuhamba
Impilo yasebusuku yaseCebu, ePhilippines
Izikhangibavakashi asia | | EPhilippines, Ukuzilibazisa, Ukuhamba kwe-Asia
Besihlale sisho ukuthi uhambo aluphelele uma singabazi ubusuku bendawo leyo, akunjalo? Yebo, uma uhlela ukuhambela EPhilippines, futhi ikakhulukazi ku Cebu funda ku… ayishodi uma kukhulunywa ngokuzijabulisa kwasebusuku. Ubuwazi ukuthi izakhamizi ze Cebu Esikhathini esedlule ubujwayele ukusebenzisa ubusuku bakho ukugubha kanye nabangane bakho, osebenza nabo noma amalungu omndeni? Yebo, noma kunjalo, lesi simo sashintsha ngemuva kwempi yaseVietnam. Ngalesi sehlakalo esibi, kwavela ukwesaba kubahlali abayeke ukusebenzisa impilo yabo yasebusuku, kepha ungakhathazeki, lokhu sekushintshe kakhulu kule minyaka edlule! Izivakashi ezivela e-Asia ezilethe ushintsho oluphelele emfanekisweni wobusuku ku Cebu.
Namuhla, Cebu inama-nightclub, imigoqo, amathilomu namadisco. Eziningi zalezi zindawo zihlala zivulekile kuze kube sekuseni. Iziphuzo kanye nokudla okuthengwa kuma-disco, kuma-nightclub, amathilomu nemigoqo kuyatholakala ngamanani aphansi kakhulu. Ucezu lolwazi olubaluleke kakhulu ukuthi ngoLwesithathu yizinsuku ezikhethekile zabesifazane abavela Cebu, ngesizathu esilula sokuthi abesifazane abakhokhi ukungena. Ngakho-ke uma ungowobulili besifazane unenhlanhla… Sebenzisa lesi simo!
Lezi zindawo zasebusuku zivame ukuminyana ngezimpelasonto, ngakho-ke kungakuhle ukuthi ugweme amahora okujaha. Akuwona umqondo omubi ukuvakashela elinye lala makilabhu phakathi nezinsuku.
Uma ukhathazekile ngokuphepha esizeni, khohlwa ngakho! Amaphoyisa we Cebu Akubekezeleli noma yiluphi uhlobo lokuphazamiseka futhi bahlala beqaphile ukugcina ukuthula ezindaweni ezahlukahlukene.
Ngakolunye uhlangothi kungumbono omuhle ukuvakashela amakhasino we Cebu . Zama inhlanhla yakho, mhlawumbe uzowina imali ethile!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » EPhilippines » Impilo yasebusuku yaseCebu, ePhilippines
U-Ile Du Levant, indawo yokuqala enqunu eFrance
Imfashini, izitolo zezingubo nokuthenga eThailand